Black Hat Marketing Na Ihe Mere O Ji Dị Mkpa Iji Zere Ya & Na-eme Ihe Site na Ọka Mmiri
Black Hat SEO bụ otu n'ime usoro ahịa kachasị ize ndụ. Ntucha isiokwu, ịzụta njikọ na ndị na-eso ụzọ, isiokwu na-atụgharị, na ịpị mgbasa ozi gị adịghị ekwe site na engines ọchụchọ . O di nwute, ọtụtụ webmasters na-etinye aka na nwa ojii SEO ma ha amaghi na Google, Bing, na Yahoo ga-eme ka saịtị ma ọ bụ machibidoro ha iwu.
Michael Brown, onye ọkachamara ọkachamara, na-ekwu na ọ bụrụ na ị na-enweta ozi ịntanetị na-adịghị anakọta ma na-aghọgbu ndị enyi mgbasa ozi mmekọrịta, oge a bụ oge ịgbanwe usoro ahịa gị. Ọ bụrụ na ị jụ iwepụ nkwụpụ si na nchekwa data ma ọ bụ ebe obibi nke ebe nrụọrụ weebụ gị, ị ga-aga megide iwu na ụkpụrụ nke Federal Trade Commission.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-adịghị mma, ịnwere ike ịgaghị enwe ihe ịga nke ọma na ịntanetị. Ọ bụ ezie na nwa okpu SEO atumatu na mmadụ media usoro nwere ike iduga engines search na Facebook ka igbochi profaịlụ gị, enwere ohere na ị ga-etinye n'azụ Ogwe ma ọ bụrụ na-anọgide na-eme nwa okpu SEO atụmatụ. Ntak ị gaghị ahọrọ blanket SEO nke kachasị mma na ụzọ dị mma iji nweta ọkwa nyocha dị mma. Mụta usoro na ọnọdụ ndị gbara gburugburu ahịa ahịa ma jiri nlezianya na - elekọta ha.
Zere Ndị Craigslist Na-ewe Ihe Ubi
Ọ dị mkpa iji zere nchịkọta ọka craigslist ruo n'ọtụtụ dị iche iche. Ndị dịgasị iche iche SEO maara na azụmahịa ha enweghị ike ibi ndụ na ntanetị n'enweghị usoro siri ike na search engine optimization dị ike. ọ bụghị dị ka a ga - asị na ị ga - achọpụta ya, ebe ọ bụ na ị nwere ike ịhapụ aha gị na ịntanetị. Ọtụtụ narị puku peeji nke a na - edepụta kwa ụbọchị, na engines ọchụchọ nwere ike ịchọta ngwa ngwa onye na - ezube mmasị na craigslist. ndị ọkàiwu nọ n'ebe ahụ iji dozie nsogbu iwu niile, n'ihi ya, ị ga - ezere ịkwado ha.
Ịzụtala Lists Email
Ọtụtụ ndị na-etinye nwa nwa ojii SEO zụta aha email site na ndị ahịa na ahịa dị iche iche. Tụkwasị m obi, ọ bụghị ezigbo omume ma nwee ike ibibi saịtị gị na ịntanetị. Ya mere, ọ dị mkpa iji zere ịzụrụ listi email ọbụna mgbe ọnụahịa ha dị ọnụ ala. Kama, ị ga-adọta ndị mmadụ ịdebanye aha maka akwụkwọ akụkọ gị na mmelite site na ụzọ iwu. Ma ị na-agba ọsọ nnukwu azụmahịa ma ọ bụ obere azụmahịa, ị gaghị azụta ozi-e na aha ahịa sitere na isi mmalite. Kama nke ahụ, ị ​​kwesịrị ịmepụta listi gị ma zipu ozi ịntanetị gị na ndị ahịa gị na ụlọ ọrụ n'otu n'otu.
I kwesiri icheta mgbe nile na o nweghi uzo ozo iga n'iru. Ya mere, ọ dịghị mkpa ịghọ aghụghọ na ịntanetị dị ka engines ọchụchọ nwere ike ịdọta gị ọnyà. Kama nke ahụ, ị ​​ga-ahọrọ maka chaa chaa chaa SEO iji kpoo okporo ụzọ gị na ebe nrụọrụ weebụ gị. Mee ka ọnụọgụgụ nke ndị debanyere aha gị site na isi mmalite iwu na nke ziri ezi. Na nkenke, ị gaghị eche na ịghọ aghụghọ search engines ma ọ bụ mgbasa ozi mmadụ nwere ike ịchekwa gị n'ịntanetị n'ihi na ọ bụghị ya.
Mgbe ọ na-abịakwute nwa ojii SEO na email ahịa, ị kwesịrị ịmara ihe bụ isi nke ihe mere ọ ga-eji zere ya. Ejila onye ọ bụla zụta adreesị ozi-e, ọ dịghịkwa atụgharị isiokwu gị iji hụ na nchekwa gị na nchekwa gị.